Years 35 हप्ता गर्भावस्था भनेको बच्चाको कोलोबाकसँग भेटको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। ए)
, गर्भधारणको क्षणदेखि नै 29 -2-245 days दिन बित्यो। सायद प्रत्येक भाई आमाको आमा आफ्नो पेटमा के भइरहेको छ भन्नेमा ठूलो चासोको विषय हो। आखिर, बच्चा प्रकाशमा देखा पर्नेछ जबसम्म यो कसरी देखिन्छ कि यो कस्तो देखिन्छ र के महसुस हुन्छ भनेर थाहा पाउनु असम्भव छ।
गर्भावस्थाको year 35 वटा हप्तामा, बच्चा जन्म लिन को लागी तयार छ। यस अद्भुत समयमा आइमाई पहिले नै मातृत्व बिदामा छ र बच्चाको भविष्यको दायिको व्यवस्था गर्न अघि बढ्नुहोस्। इन्ट्राटनरल विकासको year 35 वटा हप्ताको हप्तामा के हुन्छ र कसरी आमाले महसुस गर्छन्, तपाईं यस लेखबाट सिक्नुहुनेछ।
गर्भावस्था हप्ता व्यापारी, उनको वजन
बच्चालाई 35 35 गर्भावस्था हप्तामा के हुन्छ? भ्रुणको आकार र तौल के हो? बच्चा स्वतन्त्र जीवनका लागि लगभग पूर्ण रूपमा तयार भैसक्यो: अंगहरूको मुख्य प्रणालीले गठन समाप्त गरिसकेको छ, र गर्भावस्थाको year 55 हप्ताको 355 किलोग्राममा बच्चाको वजन। हरेक दिन भ्रुणको शक्ति 200 ग्रामबाट बढ्छ, जसको मतलब भविष्यको आमाको पेट बढ्दैछ।
<< p> बच्चाले पहिले भन्दा कम सक्रिय रूपमा सार्दछ: यो तथ्यको कारणले हो कि उसले भर्खरै ठाउँको अभाव छ। यस अवधिमा धेरै आमाहरू देख्न सकिन्छ कि कसरी बच्चा कसरी "आरामदायी हुन को लागी कोशिश गर्न सक्छ, जोड दिइएको छ, शरीर को अर्को भाग: यो धेरै हास्यास्पद देखिन्छ। कम्तिमा एक घण्टा एक घण्टा, बच्चाले आमालाई "संकेत" दिनुपर्दछ। यदि नियमित आन्दोलनहरू गर्भावस्थाको years 35 हप्ताहरूमा हराइरहेका छन्, तपाईंले डाक्टरलाई भेट्न आवश्यक छ।
गर्भावस्थाको th 35 औं दिनमा, धेरै बच्चाहरू सहि ओल्दछन्, अन्तमा बच्चा जन्माइसपानको लागि सकेसम्म स्थिति छनौट गर्नुहोस्। बच्चालाई तलतिर झुक्नु पर्छ र आमालाई आमालाई परिणत गर्दै। सुँडेनीहरूको यो स्थिति प्रमुख पूर्वावलोकन भनिन्छ।
35 35 हप्तामा, बच्चाको नोगाट इन्स्ट्रुट्समा पुग्छ। हो, न nails हरू धेरै पातलो र अधिक सम्झना छ कि फिल्म। खरिदहरू, धेरै बच्चाहरू स्क्र्याचहरूको साथ र color ्गमा देखा पर्दछन्: यस्तो टेन्डर न nails ले बच्चाको छालालाई चोट पुर्याउँछ जब यसले तीव्र बेहोश चालहरू बनाउँछ। बच्चाको औंलाहरूमा अद्वितीय रेखाचित्रहरू देखा पर्दछ, र अनुहारको सुविधाहरू बिस्तारै आमा र बुबासँग मिल्दोजुल्दो हुन्छन्।
subcuteous फ्याटो टिश्यू जुन चिसोबाट शरीरलाई बचाउँछ, बाक्लो हुन्छ। यसको कारणले, छालालाई स्मूथ र अधिक फिक्का हुन्छ। Lanuga (छाला मा सुरक्षा बन्दूक) गायब हुन्छ। शरीरमा बढ्दो हृदयस्पर्शी फोल्डहरू, विशेष गरी घाँटी, जोड्स र बगिरहेकोमा ध्यान दिएर।
गोल गाल, धन्यवाद एक राम्रो दृश्य प्राप्त गर्नुहोस्। इन्द्रेणी आँखा म्यानले आनुवंशिक रूपमा पूर्वनिर्धारित रंग प्राप्त गर्दछ। के गाउँतिर, instrainturnternine विकासको 35 35 हप्तामा समय समयमा बच्चा आँखा खोल्दछ: यो प्रकाश र अन्धकारमा पहिले नै फरक हुन्छ।
35 गर्भावस्थाको एक हप्ता भन्छ कि बिस्तारै अस्पतालमा चीजहरू स collect ्कलन गर्ने समय हो। अर्को weeks हप्तामा बच्चाले आमालाई आश्चर्यचकित गर्न सक्छ। तसर्थ, यो सार्थक छ तपाई संग कागजातहरू लिन, र अत्यधिक नहुनुहोस्।
यस चरणमा सकारात्मक भावनाहरू प्राप्त गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो ताजा हावामा हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, बच्चाका बुबासँग समय बिताउन, साथीहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस्।
बच्चा अझै द्रुत रूपमा बढ्दै छ। यसको वजन लगभग 200 ग्राम द्वारा बढ्छ। हप्तामा। शरीरमा अझै पनि क्यानर फेर्न सक्छ। कोही हराएको छ। छाला स्पिल गर्न समाप्त हुन्छ, यसलाई नितम्ब, घाँटी, ह्यान्ड र खुट्टाको जोर्नीहरूमा मात्र पल्टाउँदैन, तिनीहरू मुक्ति पाउँछन् र बच्चाको जन्म पछि। त्यहाँ हथेली र खुट्टामा एक अद्वितीय रेखाचित्र छ।
तपाईको गर्भावस्थाको years 35 हप्ता, हड्डी खरिदेतिकरणको लागि पुरूषलाई पहिले नै आवश्यक छ। यो प्रक्रिया लामो समय सम्म पुगेको छ।
बच्चा प्रायः बच्चा जन्माउनको लागि तयार छ, धेरै डाक्टरहरूले ती आमाहरूलाई दृढतापूर्वक आउँदै गरेको ती आमाहरूलाई परास्त गरे। तर अझै पनि, फल आदर्श रूपमा 38 38 हप्ता द्वारा आदर्श छ। डाक्टरहरूको शब्दहरू रगत पहिले नै रगतमा पम्प गरिएको छ भनेर पुष्टि गर्दछ, र मस्तिष्कले रगत गठनको प्रकार्य उत्पादन गर्दछ, दिमागले काम गर्दछ।
आन्द्रा अझै पूर्ण रूपमा गठन गरिएको छैन। हाल, मेकोनोनिया (मूल मल) संचय गर्दछ। यो बच्चाको जन्म पछि एक दिन पछि देखाइएको छ। थप रूपमा, फोक्सो पनि अझै पूर्ण पूरा भएको छैन। र सबै कुरा धेरै व्यक्ति हो किनकि भ्रुणको तयारीलाई गाह्रो लाग्छ। सायद उनलाई थप चिकित्सा हस्तक्षेप चाहिन्छ, तर धेरै जसो धेरै जसो, जब जीवनको लागि तयार बच्चाको जन्म भएको थियो।
तेस्रो त्रेटरमा अल्ट्रासोनिक अनुसन्धान गर्भावस्थाको 320 हप्ताको गर्भावस्थाको लागि निर्धारित छ। यद्यपि प्रक्रिया पनि धेरै हप्ता अघि पनि देखाइएको छ, यदि डाक्टरले यसलाई आवश्यक ठान्छन्।
तेस्रो अनिवार्य अल्ट्रासाउंड आवश्यक छ वितरण को लागि बच्चा को वृद्धि र विकास, फल अन्डा यसको स्थिति, तत्परता मूल्याङ्कन गर्न।
यो भ्रूण, placenta र amniotic तरल पदार्थ को राज्य को पूर्ण क्लिनिक स्थापना गर्न Dopplerometer को परीक्षा पूरक गर्न सिफारिस गरिएको छ। तपाईं एक पूर्व-दर्ता गरेर केन्द्र "मार्था" मा अनुसन्धान खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
सामान्य रूपमा, भ्रुणको वजन अहिले 1 15500-1-1690 छ, cm2 सेन्टीमिटर बढेको छ। कलेजोको गठन भइरहेको छ, NEMPRINSES सुधार भइरहेको छ। पनक्रियास सेलुलर स्तरमा बढ्छ, तर यसले अझै एन्जाइम उत्पादन गर्दैन। Subcutaneout व्यर्थ फाइब फाइबर को एक तह अधिक हुन्छ, को कारणले गर्दा छाला कभ्यूहरूले अधिक गोलो आकारहरू प्राप्त गर्दछन्।
Òðèäöàòü ïÿòàÿ íåäåëÿ ðàçâèòèÿ áåðåìåííîñòè - ýòî òîò ïåðèîä, êîãäà áóäóùèé ðåáåíîê, ñîçðåâàþùèé â óòðîáå ìàòåðè, èìååò óæå ANA ôóíêöèîíèðóþùèå âíóòðåííèå îðãàíû। Ïëä ñêîîîòñííííûûûûûûûûûûûûûûûûååû Å åèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèûûèûèûûèèèèèè
IA 35 म एक एक एक एक एक áòòùààà ààààààíòà ऊ éíííþþ òòòòéééééééééééééééééééé ÷ î ÷ ÷ ÷î, ùùåå ùîîîî << <
ing ñliellaûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû öö åò
· ñíàà ñ 35 íÅäëèè åñññññññääääää nn एक एक एक एक एक एक AA íÀæäþþþ50åþþþþþþþþþþþþ। डी डी ææåüüüüîîîîêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêññññññññññààààààññàñññññññññàñàñññññàààààààà 24 .......... ,446-47 नी। Êàííêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêüüêóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêüüêüüüüüüóüüüóüüüüüüüüüüüüüüüüüóóüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Åüññàààààààààààà àà।।
í àààààà échåà éèëå øèèàåååå øñèàse, øñèàse, øèse, øèce, øèëåå Aø त्यहाँ îîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàààà।।।
ïøøøååå ààààààààààòòééééééééééééééééЕéé Ü à ई ààâàâÒ ââââîâîâîîâÒüî III îîîîîîîî à à ààààà
í í î î ð ð ð ð ð å ç ç ò ç î åîîòòòåò åì åå एक एलब्सी एक होरियो Íàöööààüäääää êààëëëëëîîîîîòéòéééééééççççèììììììììûûûûûûûûûûûûûûûûûûììììììì Ààûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûèèèèààààààààààààààììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì अवसर टीएए ðááäàñññññññàààààà èèèèèèèèèèèè .... .Èèññññ Â ööñååååääääâîîåååõõõäääàääààââââââåÒûåòòòòòòãããããããããããããããèèèèñññññññññìììììììììûìññññññññññññññññññìññìñ Ïèèîîîîîîîîîîîîîîîøøøøøøøøøøø êèåàåà àîàîàààààààààààaààà
ùùùùééééöà åûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû ûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûààûûûûûûàûûûûûûûûûûûûûûûûûûààà å ûûûûûû å ò ò ñ ñ ñ3 ñ <<<< << << << << ÿ ÿÿÿÿòïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò Ì î î î ààüüüuüa, ,ûûûûûûûûûûûûûûûûûû Î î î îòòòòòòòòòòüüòüìüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüaüa òüüaòòòò चौथाई एक ïîêà ìàòêà ïðîäîëæàåò ñâîå äàâëåíèå IA äèàôðàãìó, ई äûøàòü म ÷ AIU òðóäíî, ðåêîìåíäóþò âñòàâàòü IA ÷ åòâåðåíüêè ई äåëàòü ïàðó ãëóáîêèõ âäîõîâ ई âûäîõîâ।
IA 35 íåäååäååñññÒèñ îîîööööööàääòòòòÒñòøøøøêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê ããããããããôôçççàààààààà Ïàà 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3ååååòòòòòòòòò बाहिसम enchóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Òàê êàê ìàëûø ïîòðåáëÿåò áîëüøîå êîëè ÷ åñòâî êàëüöèÿ, èñòî ÷ íèêîì êîòîðîãî åñòü ìàòåðèíñêèé îðãàíèçì, áóäóùàÿ ðîæåíèöà äîëæíà âîçîáíîâëÿòü टीएए ïóòåì óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó ìîëî ÷ द्वितीय-êèñëûõ ïðîäóêòîâ।
बच्चा यस क्षणमा बढेको छ र पूर्ण रूपमा गठन, व्यक्तिगत अनुहारको सुविधाहरू प्राप्त गर्दै। उनको शरीर लगभग आमाको पेटिका बाहिर स्वतन्त्र काम र जीवनको लागि लगभग तयार छ, तर अझै पनि भ्रुणको पूर्ण विकासको लागि केहि आवश्यक छ।
सामान्यतया यस हप्ताको अन्त्यमा, बच्चाले आमाको पेटमा धेरै सहजत स्थिति पाउँदछ, जसमा यो यसको जन्मसम्म रहन्छ। सब भन्दा आरामदायक र शारीरिक पूर्वनिर्देशक हेड प्रीपेज हो, जब CRAMBS को टाउको तपाईंको पेटको तल अवस्थित छ।
तथ्यको 35 35 हप्ताको गर्भावस्थामा तपाईंको बच्चाको खुट्टा पछाडि माथि छ र एक ह्याकरसँगै फर्कन्छ, उसलाई बिल्कुल कुनै असुविधा प्रदान गर्दैन।
बच्चा आन्दोलन, यसको उचाई र वजन
ट्युमीमा, आमाको व्यावहारिक रूपमा नि: शुल्क ठाउँ बाँकी छैन, त्यसैले तपाईं स्पष्ट रूपमा गर्भावस्था आन्दोलन र बच्चाको धक्का मा महसुस गर्नुहुन्छ। प्राय: त्यस्ता आन्दोलनहरूले एउटी महिला र पीडादायी संवेदनाहरू प्रदान गर्न सक्छ। बच्चा शक्तिशाली भएको छ, त्यसैले पत्रा-पसलको आमाको खुट्टाको साथ खुट्टाको साथ एक मूर्त पीडा ल्याउन सक्छ।
गर्भावस्थाको यस अवधिमा चैपल फ्रिक्वेन्सी उस्तै रहन्छ। भविष्यको आमा 12 घण्टाको लागि स्पष्ट रूपमा कम्तिमा 10 जुत्ता र उनीहरूको बच्चाको आन्दोलनहरू हुनुपर्दछ।
यो नबिर्सनुहोस् कि आन्दोलन गतिविधिमा बृद्धि, साथै बच्चाको चालमा अभावले डाक्टरको लागि तुरुन्त अपील आवश्यक छ। त्यस्ता लक्षणहरूले रिपोर्ट गर्दछ कि फल असुविधाको अनुभव गर्दैछ र सम्भावित कठिनाइहरूको अनुभव गर्दैछ।
अब तपाईंसँग weeks 35 हप्ता गर्भावस्था छ, बच्चाको वजन छ, जबकि प्रत्येक व्यक्तिगत केसको वजन प्रणाली फरक हुन सक्छ। अब बच्चा धेरै सक्रिय रूपमा आफ्नो वजन प्राप्त गर्दैछ, एक साप्ताहिक 200 ग्राम साप्ताहिक रूपमा थप्दै। खैर, भ्रुणको विकास पहिले नै 46 46 सेन्टीमिटर बढ्न सक्दछ।
COSSTIONSS र गर्भवतीहरूको शरीरमा परिवर्तनहरू
गर्भावस्थाको huppects 35 हप्ता गर्भावस्थाको सुनिश्चित गर्दछ, भावी आमाको हितलाई जटिल र बादल नपरोस्। सँगै, नजिकैका अंगहरू निचोरेर भवनको फल जारी रहन्छ। Z यसको लागि, रोगहरूको धैर्यताको लागि महिला खाताहरू खाताहरू, र कहिलेकाँही केवल सास फेर्न पर्याप्त हुन्छ - परीक्षक र फोक्सोको कडा दबाब।
unde हप्ता unts हप्तामा चुपचाप छ, जो नजिकको बारेमा बोल्दछ। तर यो क्षण असुविधाले भरिएको छ - शौचालयमा सामेल हुनेको आग्रह, राती पनि यसलाई नदिनुहोस्।
<< p> आफैंमा धेरै अनिर्मनियाबाट ग्रस्त छन्, जुन किन विच्छेद, कमजोरी, कमजोरी, कमजोरी हो। यसका ओमनिओ, डर देखा पर्दछ, बच्चा जन्माईसँग सम्बन्धित छ र नयाँ सदस्यहरूको उदय। यो नोट गर्नुपर्नेछ कि लगभग सबै महिला यस अवधिमा सर्जरी अनुभवहरू छन्। E तिनीहरूमा विजयी हुनु उचित छ, हामीले आफैंबाट छुट्टिनु पर्छ र उत्तमको लागि ट्युन गर्न आवश्यक छ।
मूड ड्रपहरू हुन्छन् जब पछिल्लो साप्ताहिक ओछ्यानमा सम्बन्धित नकारात्मक भावनाहरू एक अर्थ-ग्रेड प्रसूतको साथ आर्किन्छन्। सानो आनन्दहीन र बच्चाको सबै घरपरिवार।
गर्भाशयको आगमन समय 35 35 सेन्टीमिटर हो। यो यसको अधिकतम आकार चाखेको छ, थप विकास को कुनै ठाउँ छैन। जनावरको तन्कि iting एक स्पष्ट राहत हो, किनकि यो धेरै सजिलो, एक तरिका हुन सक्षम छ, श्रोणि क्षेत्रमा गिरावट आएको, एस्टियो यूनिनेशन भविष्यको सामना गर्ने एक मात्र होइन।
B35 साप्ताहिक ओछ्यानहरू ग्रीष्कारचक संग सार्न सजिलो छैन। खुट्टामा छरिएका, कमता, दुखाइमा दुखाइ, कार्यहरूमा सीमित, महिला अनजानमै गिर वा हिट गर्न सक्छन्। कसैको कम्पनीमा राम्रो हिड्नको लागि यो आवश्यक छ।
अन्तिम अध्ययन जुन तपाईंलाई बच्चा जन्माईनु अघि पठाइनेछ रक्त परीक्षण हो। हेमोग्लोबनको स्तरमा मुख्य ध्यान भुक्तान गरिएको छ किनकि गर्भावस्थाको years 35 वटा दिउँसो भविष्यमा आमा र बच्चाको धेरै राज्यमा क्षतिपूर्ति दिन बाँकी छ।